Dawladda Imaaraadka oo Ciidamo tobabaran ku wareejisay Somalia | Berberanews.com
Home WARARKA Dawladda Imaaraadka oo Ciidamo tobabaran ku wareejisay Somalia
Dawladda Imaaraadka oo Ciidamo tobabaran ku wareejisay Somalia
Dowladda Isutagga Imaaraatka Carabta ayaa dowladda Soomaaliya ku wareejisay ciidamo gaadhaya 311 askari oo ay soo tababareen.
“Waxaan dadaal xooggan ugu jirnaa sidii ciidammada xooga dalka ay u heli lahaayeen tababaro caalami ah, qalab dhameystiran iyo Mushaar joogta ah si ay argagaxisada Al-Shabaab uga saaraan meelaha ay ku dhuumaaleysanayaa,” ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda.
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa dhowaan si aan qarsooneyn u sheegay in “aysan Al-Shabaab ka adkaan karin ayadoo aan la helin ciidamo tababaran oo qalabkooda u dhameystiran yahay.”
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in ciidammadan uu u dhameystiran yahay qalabkooda “ayna diyaar u yihiin xoreynta dalka”.
“Qalabka ay haystaan wuxuu isugu jiraa hub iyo gaadiid. Taliyayaasha ciidamada waxaan u sheegayaa in ciidankaas ay ku xidhnaan doonto sida aad ula dhaqantaan, natiijada ay dagaalka ka soo hoyaan,” ayuu yidhi Ra’iisul wasaare Khayre.
Previous articleTaageerayaasha Waddani ee Burco oo Ciidda qariyay iyo Xiddigaha Geeska oo ka tumay
Next articleSammaale ma wuxuu noqday ninkii daadka ka reebay ninka ay colka yihiin?